'प्रधानमन्त्रीकै प्रेरणाले सप्तकोशीमा पानी जहाज चलायौं'
11973635 547120 4506819 6919696
‘प्रधानमन्त्रीकै प्रेरणाले सप्तकोशीमा पानी जहाज चलायौं’
१४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १४:४८
काठमाडौं । गत चैत्र १६ गतेदेखि सप्तकोशीमा मोटरबोट सञ्चालनमा आएको छ । पानी जहाजकै शैलीमा नेपालमै निर्माण गरिएको मिनी पानी जहाज सप्तकोशीमा सञ्चालनमा आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि एउटा सपना थियो, हिन्द महासागरसँगै नेपालका नदीहरुमा पानी जहाज चलाउने । उहाँकै सपनालाई केहीहदसम्म भएपनि साकार पारेका छन्, राजेन्द्र कार्कीले ।
जेट बोट ८८४८ नाम दिईएको मिनी पानी जहाज सप्तकोशीमा तिनै कार्कीले सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । यो जहाज सञ्चालन गर्ने योजना कसरी बन्यो ? कतिको लागतमा बन्यो ? सप्तकोशीमा मिनी जहाज चलाउँदा के कस्तो अनुभव भईरहेको छ ? लगायतका विविधि विषयमा हामीले सञ्चालक कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौंः
१.जहाजको सञ्चालक हुनुहुन्छ । कहाँबाट जहाज चलाउँछु भन्ने सोच आयो ?
एकदमै महत्वपुर्ण प्रश्न सोध्नुभयो । मेरो बाल्यकाल भोजपुरमा बित्यो । मैले त्यहाँ १२/१३ बर्षको उमेर विताए । त्यतिखेर खाद्य सामग्री ल्याउन वा बजार आउन पर्‍यो भने धरान, विराटनगर, चतरा आउनुपथ्र्यो । जुन यहि कोशी नदी हुँदै जानुपथ्र्यो । सप्तकोशीको किनारै किनार । एकदमै बिकट बाटो थियो । त्यो बाटो हिडिरहँदा यहि कोशीको बाटोको प्रयोग गर्नुको कुनै विकल्प भए कति छिटो र कति सहज रुपमा यात्रा गर्ने थियौ भन्ने परिकल्पना मेरो दिमागमा आउथ्यो ।
२. भनेपनि बाल्यकालको त्यो परिकल्पना युवा अवस्थामा आएर पुरा गर्नुभयो ?
हो बाल्यकालको त्यो परिकल्पनाले युवाअवस्थामा पनि प्रेरित गरिरह्यो । संसारको विकसित मुलुकहरु जो समुन्द्रहरुसँग पहुँच राख्ने गर्छन् । तिनिहरुले ठूल्ठूला पानीजहाजहरु चलाएको देख्दा हामी पनि नेपालमा प्रयोग गर्न सक्छौ भनी अध्ययन सुरु ग¥यौं । एडमन्ड हिलारीले सगरमाथा आरोहणकै क्रममा जेटबोट सञ्चालन गरेको हामीले युट्युबमा हेर्न सक्छौ । आज भन्दा ४० औं वर्ष अघि नै कोशी नदी लगायत हाम्रो देशको ठूल्ठूला नदीहरुमा जेट बोट सञ्चालनमा ल्याएको देख्दा किन गर्न सकिदैन भन्ने सोच्यौ । अहिले प्रविधीले धेरै अघि पु¥याइसकेको छ । त्यसैले विगत १/२ बर्ष अघिदेखि हामी केही युवा मिलेर सर–सल्लाह र छलफल गर्यो । जेटबोट खरिद गर्ने प्रक्रिया गरिरहँदा २ जना ईन्जिनियर साथीहरुसँग संयोगबश भेट भयो ।
हामीले मिनीजेट नेपालमा बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन भनेर प्रस्ताव गर्यो । उहाँहरुले आर्थिक रुपमा सहयोग गर्नुहुन्छ भने बनाउन सक्छौ भन्नुभयो । त्यसपछि उहाँहरुको प्राविधिक क्षमताको सदुपयोग हामीले आर्थिक रुपले गर्दै गयौं । गत बैशाख २२ गतेदेखि कम्पनी दर्ता गरेर करिव नौ महिनाको मिहेनतमा हामीले पूर्ण रुपमा जहाज सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने भयौं । उहाँहरुको लगनशिलता र मेहनतकै कारण चैत्र १६ गते यहि सप्तकोशी नदीमा परिक्षण गर्यौ । सफल परिक्षणपछि हामीले व्यवसायिक रुपमा सप्तकोशी टुरिजम एण्ड वाटर ट्रान्स्पोटेसन प्रालीको नाममा नेपालमै उत्पादन भएको नेपालमै निर्माण भएको माउन्ट ८८४८ नामको मिनी पानीजहाज चतराबाट भोजपुरको सिम्लेसम्म नियमित सञ्चालन गरिरहेका छौ ।
३.टिममा को–को हुनुहुन्छ ?
२ जना ईन्जिनियर हुनुहुन्छ । ३० बर्षमुनीका । एकजना सुमन खत्री काठमाडौं युनिभर्सटीबाट मेकानिकलमा ईन्जिनियर गर्नुभएको र अर्को हुनुहुन्छ लेखराज रिजाल । उहाँ पनि इन्जिनियर नै हुनुहुन्छ । लगानीकर्ता हामी जम्मा ६ जना छौ ।
४. प्रधानमन्त्रीले पनि जहाज सञ्चालनमा ल्याउँछु भन्नुभएको थियो । तपाईहरुले त सञ्चालनमा ल्याउनुभयो । यसमा कत्तिको मेल खान्छ ?
यसमा चै के छ भने देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा सपना देख्नुभयो । नेपालमा पानी जहाज सम्भव छ । नेपालमा पानीजहाज चलाउँछु भन्ने उहाँको संकल्प, उहाँको परिकल्पना, उहाँको योजनाले हामीलाई नेपालमै पानीजहाज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा एकदमै उत्साहित बनायो त्यसकै प्रेरणाले नेपालमा चल्न सक्ने मिनीजहाज बनायौं जसमा म गर्व पनि गर्छु । यहि आकारका मिनीजहाज सप्तकोशी नदीसँगै, अरुण, कालिगण्डकी, दुधकोशी, नारायणी नदीहरुमा पनि चलाउन सक्छौं भनेर हामीले सञ्चालन गरेका हौं ।
हाम्रो कम्पनीले पानीजहाज बनाउने, खरिद बिक्री गर्ने, मर्मत सम्भार गर्ने उद्देश्य साथ स्थापना गरेका हौं । यो प्रधानमन्त्रीको सपनासँग मेल खान्छ । उहाँकै प्रेरणाले हामीले जेटबोट बनाउन सफल भएका हौं । हामीले यो कुम्भ महोत्सवमा उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएर उहाँकै हातबाट जेटबोट उदघाटन गर्ने योजना बनाएका थियौ । तर मौसमको कारणले उहाँले सहभागिता जनाउन सक्नुभएन । त्यसकारण उहाँको हातबाट उद्घाटन हुन पाएन । समय मिलेछ भने नेपालमा बनेको पानीजहाज उहाँकै हातबाट उदघाटन गराउने सोच छ ।
५.जेट बोट सञ्चालन गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो ?
त्यस्तो औपचारिक सल्लाह गरेका थिएनौ तर उहाँको सचिवालयसँग पटक–पटक कुरा गरेका थियौं । मेरो पनि जीवनको महत्वपुर्ण समय राजनीति र प्रधानमन्त्रीकै पार्टीमा व्यतित गरेको हुनाले उहाँसग मेरो राम्रो पहुँच छ ।
६.प्रधानमन्त्रीले यो कुरा थाहा पाउनु भएको छ ?
एकदम थाहा पाउनु भएको छ । उहाँ हामीप्रति निकै उत्साहित हुनुभएको छ । उहाँले यो कुम्भमेलासँगै जोडेर यो नेपालमै बनेको जेटबोटलाई महत्वको साथ हेर्नु भएको छ ।
७. यो जहाजमा चढ्नेलाई कत्ति महंगो पर्छ ?
हामीलाई खरिद गर्नलाई युरोपियन देशहरुमा भन्दा नेपालमै बनाएको चै संसारमै बनाएको सबैभन्दा सस्तो भनेर प्राविधिक साथीहरुले दाबी गर्नुहुन्छ । विगतमा भारतबाट ल्याएको भन्दा १ करोड सस्तोमा बनेको हो । भारतबाट ल्याएको २ करोड ५० लाख पर्याे भने यहाँ नेपालमा डेढ करोड रुपैयाँमा तयार भएको हो । हाम्रो लागतको हिसाबले सस्तो हो र उपभोक्ता, यात्रुहरुको लागि पनि यो सस्तै हो किनभने पाँच घण्टाको मोटरबाटोमा ७ सय ५० रुपैयाँ गाडी भाडा तिुर्नहुन्छ । कोचिएर बस्नुपर्छ । मनोरञ्जनपुर्ण यात्रा १५ मिनेटमा ४ सय रुपैयाँमै गर्नुहुन्छ । त्यसकारण एकदमै उहाँहरुको लागि सस्तो छ ।
८. स्टेशनहरु कुन कुन हुन् ?
जेट बोट चढिसकेपछि पहिलो स्टेशन नेपालकै प्राचिन नदी बराह क्षेत्र त्यसपछि त्रिवेणी त्यसपछि माईबेनी र अन्तिममा भोजपुरको कोप्चे सिम्ले हो ।
९. सबैको भाडा रेट एउटै हो ?
होइन । सबैको फरक फरक हो । बराह क्षेत्रको २ सय छ । त्रिवेणीको ३ सय ५० र सिम्लेको ४ सय छ ।
१०. यसको यात्रा कत्तिको सुरक्षित छ ?
अहिले सम्म त्यस्तो ठूलो कुनै दुर्घटना भएको छैन् । पहिलेदेखिनै सञ्चालनमा आइरहेको नै हो । तर पनि जलयात्रामा जाँदा यात्रीहरुले अनिवार्य रुपमा लाइफ ज्याकेट लगाउनुपर्छ । केहि कारणवश कोहि मानिसहरु उछिट्टिएर झर्यो भने पनि सहज तरिकाले उद्धार गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा के भने हाम्रो बोटको सम्पुर्ण लागतको पनि बिमा गरेका छौ । प्रत्येक व्यक्ति यात्रुहरुको बिमा गरेका छौ । त्यसको साथै हाम्रो चालक, सहचालक र क्रु मेम्बर सबैको बिमा गरेका छौं । त्यसकारण एकदमै सुरक्षित छ भनेर हामी दाबी गर्न सक्छौ ।
११. यात्रुहरुलाई के भनेर आह्वान गर्नुहुन्छ ?
यहाँ हामीले २ वटा क्याटागोरीमा हाम्रो उपभोक्तालाई राखेका छौ । एउटा हाम्रो नियमित यात्रुहरु, जो आफ्नो गन्तव्यमा जानुहुन्छ । आफ्नो काम सक्नुहुन्छ अनि फर्कनुहुन्छ । नियमित आउजाउ गर्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई हामी नियमित यात्रु भन्छौ । दोस्रो हामी पर्यटकहरुलाई ध्यान दिन्छौ । विश्वकै सस्तो जलयात्रा हो यो ।
यहि यात्रा हामीले सिंगापुुरमा गर्यौ भने कम्तीमा पनि नेपालको ५ हजार रुपैयाँ खर्चनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशहरु जस्तै दुबई कतारहरुमा पनि लगभग ७ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यति ठूलो नदिमा यति सस्तो, मनोरञ्जनपुर्ण, सुन्दर प्राकृतिक दृश्य भएको ठाउँमा यति सहज रुपमा गराएका छौं ।
jet boat, jet bote saptakoshi, Moter boat, जेटबोट, पानी जहाज, पानीजहाज, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भारत, मिनीजहाज, सप्तकोशी
Prevसवारी दुर्घटनामा परी स्पेनमा एक नेपालीको मृत्यु
मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्गको ९३.६ किलोमिटर निर्माणNext
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियमित जाँचका लागि गंगालालमा
भारतले लगायो टिकटकसहित ५९ चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध
‘मैले प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आग्रह गरेको हुँ, मजाकमा नउडाउँ’ : प्रधानमन्त्री